Mursal oo RW Rooble ugu baaqey inuu ka shaqeeyo 3 arrimood | KEYDMEDIA ONLINE
Mursal oo RW Rooble ugu baaqey inuu ka shaqeeyo 3 arrimood
Kadib markii shalay si aqlabiyd leh loo ansiyay, Ra'iisul wasaare Rooble ayaa xalay hoyga uu ka degan yahay Villa Soomaaliya ugu tagey gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal, isagoo uga mahadceliyay doorkii uu ka qaatey inuu helo kalsoonida Baarlamanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa siiyay Ra'iisul Wasaare Rooble tallooyinka ku aadan waxa ugu muhiimsan ee laga doonayo inuu qabto, maadaama uu haysto waqti aad u yar.
Talo soo jeedinta ayaa timid kadib markii RW Rooble uu xalay gurigiisa ugu tagey Mursal, si uu ugu mahadceliyo kaalintii uu ka ciyaaray in Xildhibaanada Gollaha Shacabka ay siiyaan codka kalsoonida Maalintii shalay.
Kulanka waxaa sidoo kale xaadir ahaa gudoomiye ku xigeenka kowaad C/wali Muudey.
Mursal ayaa u sheegay Rooble inuusan isku mashquulin arrimo badan, balse uu diiradda saaro doorashooyinka, amniga iyo dhaqaalaha, si looga faa'idaysto mudada kooban oo u haray dowladda, oo horey 3 sano iyo bar ku lumisay arrimo aan danaha qaranka ku jirin.
RW Rooble ayaa looga fadhiyaa Golle Wasiiro inuu kusoo magacaabo mudo yar, waxaana looga digay inuu isku mashquuliyo raadinta shaqsiyaad cusub, iyadoo tallooyinka la siinayo ay kamid tahay in Wasiiradii hore soo celiyo, isagoo boosaska u kala bedelaya.
Waare oo Xabsi Guri lagu geliyey Muqdisho
Warar 19 October 2020 15:32
Fahad Yaasiin ayaa u diyaariyay HirShabeelle Madaxweyne kasoo jeeda Beesha Abgaal, isagoo xilkaasi ka weeciyay Xawaadle, oo tan iyo aas-aaskii Maamulkan Madaxweyne ka ahaa.
Xubno ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay howlgal ka dhacay Hiiraan
Warar 19 October 2020 14:25
Gabar Muqdisho laga afduubay oo lagu qabtay Guriceel
Warar 19 October 2020 14:21
Askari ilaalo u ahaa taliyaha Booliiska oo askari kale dilay
Warar 19 October 2020 14:20